Arabia Saodita: Mpikatroka Miampanga Ilay Mpitsara Amin’ny Ady Tombotsoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2013 18:57 GMT
Vao maraimbe tamin'ny 20 Febroary, no notontosaina tao amin'ny Fitsarana Misahana ny Heloka Bevava, ao Buraidah, renivohitr'i Al-Qassim, Afovoany avaratr'i Arabia Saodita ny fotoam-pitsarana ilay mpiara-manorina ny Fikambanana miaro ny zo politika sy sivily (ACPRA), Dr Abdulkareem al-Khadr. Roa herinandro lasa izay no tokony nanaovana ny fotoam-pitsarana, saingy tsy tonga nanatontosa izany ny mpitsara. Roa amin'ireo mpiara-manorina ny fikambanana, Dr Abdullah al-Hamid sy Dr Mohammad al-Qahtani no efa niakatra fitsarana sy nalaina ambavany isan-kerinandro nandritra ny enim-bolana. Al-Khadr no mpanoratra ireo lahatsoratra marobe mampisongadina ny tranga momba ny zo ara-politika sy ara-tsivily amin'ny endrika Islamika, izay mifanohitra amin'ny fijery ofisialin'ny fanjakana.
Navoakan'ny ACPRA ny lisitr'ireo fiampangana an'i al-Khadr. Izay mitovy amin'ny fiampangana an'i al-Hamid sy al-Qahtani ary tafiditra amin'izany fiampangana izany ihany koa izy roa ireo [ar]:
Fiantsoana sy fitarihana hanitsakitsaka lalàna, fanakorontanana sy fanohintohinana ny filaminam-bahoaka mbamin'ny ny fiarova-pirenena amin'ny alalan'ny fanoratana sy fandefasana lahatsoratra miantso fihetsiketsehana eny ankalamanjana […]
Fiantsoana tsy ara-drariny ny fitondrana Saodiana ho fitondrana miaramila izay napetraka tamin'ny tsy rariny sy tamin'ny famoretana ary tamin'ny fampiasana tafahoatra ny fivavahana mba hanamarinana ny tsy rariny sy ny fanohizana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Sary nalaina tao anatin'ny efi-pitsarana, avy amin'i @alajmi01
Olona 50 no tafiditra tao amin'ny efi-pitsarana, saingy tsy tafiditra kosa ireo folo hafa satria tery ilay efitra. Tsy mitovy tamin'ny fotoam-pitsarana natao tao Riyadh, fa navela hiditra miaraka amin'ny findainy sy navela haka sary ireo mpanatrika.
Tamin'ny taona 2008, teo anatrehan'ny mpitsara izay nanameloka an'i al-Hamid sy nanome sazy an-tranomaizina efa-bolana ho azy no nitarihan'i al-Khadr ny ekipa mpiaro an'i Hamid tamin'izany, tamin'ity farany voampanga ho nanohana ireo mpanao fihetsiketsehana. Niangavy ny mpitsara tsy hitsara ny raharaha ny ekipa mpiaro an'i al-Khad noho ny ady tombontsoa manokana eo aminy sy ny toriana izay mety hisy ifandraisany tamin'ny asany teo aloha. Nilaza ilay mpitsara fa ny lehiben'ny fitsarana no tompon'andraikitra amin'izany fanapaha-kevitra izany.
Nangataka ny fandraràna an'i al-Khadr tsy hivezivezy ny mpampanoa lalàna, ary ny fampiharana ny andininy faha-6 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny heloka an-tserasera (cyber-criminalité) [ar], izay toy izao ny sazy hita amin'izany:
Sazy an-tranomaizina mety tafakatra hatramin'ny 5 taona sy onitra mety ho tafakatra hatramin'ny telo tapitrisa riyals [~800,000USD], na iray amin'ireo sazy roa ireo.
Amin'ny 10 Aprily indray ny fotoam-pitsarana manaraka.